तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् Alphabetical Index अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.
प्रकार र शीर्षक
अनुक्रमणिकाको प्रकार र शीर्षक निश्चित गर्नुहोस्
चयन गरिएको अनुक्रमणिकाका लागि शीर्षक प्रविष्ट गराउनुहोस्.
म्यानुअल परिवर्तनहरू बिरुद्व सुरक्षित गरियो
चयन गर्नुहोस् कि त अनुक्रमणिकाका लागि निर्माण गर्न वा हालको अध्यायका लागि.
पहिचायक प्रविष्टि संयोजन गर्नुहोस्
...- सँगग संयोजन गर्नुहोस् ्
उस्तै अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरूमा ठुलो बर्ण र सानो बर्णको अक्षरहरूको बिचमा भिन्नता छुट्ट्याउछ। एसियाली भाषाहरूका लागि विशेष ह्याण्डलिङ लागू हुन्छ। प्रविष्टीको केस निर्धारण गर्नलाई यदि तपाईँंले प्रविष्टीको पहिलो घटना चाहनुहुन्छ भने, संयुक्त उस्तै प्रविष्टीहरू चयन गर्नुहोस्।
एउटा प्रविष्टीको पहिलो अक्षरलाई स्वत:तरीकाले ठुलो बर्णको बनाउछ।
छुट्टै प्रविष्टिहरू स्वरूपको कुञ्जीहरू
अनुक्रमणिका कुञ्जी परिभाषित गर्नुहोस्, choose अनुक्रमणिका प्रविष्ट घुसाउनुहोस् संवाद.
चयन गर्नुहोस्, निर्माण गर्नुहोस्, वा कन्कोर्डेन्स फाइल सम्पादन गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरू क्रमबद्व गर्नका लागि विकल्प सेट गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरू क्रमबद्व गर्नका लागि भाषा नियमहरू चयन गर्नुहोस्.
Title is: अनुक्रमणिका